WOWOW Pink Bathroom na-acha uhie uhie
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ / WOWOW pink Pink Ime sista foset
Na-achọ ihe mkpuchi pụrụ iche pink? Họrọ ọkpọ mmiri a pụrụ iche iji chọọ ụlọ ịsa ahụ mma ma mejuo nrọ nwanyị ahụ. Dị mara mma na kọmpat bụ ngwaahịa ọtụtụ mmadụ hụrụ n'anya. Nke a bụ ọkpọka ụlọ ịsa ahụ, 100% enweghị ndu, enweghị nickel, ọkpọ mmiri oyi na mmiri ọkụ na-ebubata iji oge dị iche iche. Enwere ike iji ya na kichin ma ọ bụ ụlọ ịsa ahụ, ma ọ bụ ebe ọ chọrọ nhicha.
Ihe: ọla kọpa
Ebe dị mma: kichin, ime ụlọ ịwụ.
Dị Spool: seramiiki spool
Size: 15.5 * 10.9 * 4.5cm (6 * 4.3 * 1.8in)
Mbukota: 1 mpempe
WOWOW 8 chlọ ịsa ahụ Maka Bathlọ Mkpọ Ahụ Na-agbasawanye ebe niile ...
WOWOW 3 Oghere 4 Inch Centerset Faucet
WOWOW Black Bathroom Faucet with Separate Handl ...
KPỌTỤRỤ ANYỊ Adreesị United States: 8 AHRE AKW STKWỌ STE A, KENT, Obodo Ọchịchị, DE, 19901. USA TEL: 3476134901 E-mail: sales@wowowfaucet.com
Copyright © 2020-2025 WOWOW FAUCET LLC. Ikike niile echekwabara.